कांग्रेससँग संघीय फोरम र राजपाको माग : प्रदेश सभामा १३५ सिटसहित २ मुख्यमन्त्री | Ekhabar Nepal
राजनीति असोज २३ २०७४ .
काठमाडौं,असोज २२ – संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले नेपाली कांग्रेससँग प्रदेश सभामा १३५ सिटसहित २ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छन्।
संयुक्त रुपमा चुनावमा जाने निर्णय गरेका यी दुई दललाई कांग्रेसले मिलेर जान आग्रह गरेपछि उनीहरुले यस्तो दाबी पेश गरेका हुन् । यसका साथै यी दुई दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ५५ सिटको दाबी पेश गरेका छन्।
‘प्रदेश सभामा १२०–१२५ सिट त हामी दुई दल मिलेर नै जित्छौं, २ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि हाम्रो सुनिश्चित जस्तै छ । त्यसैले हाम्रो दाबी अस्वाभाविक होइन’, राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक नेता राजेन्द्र महतोले भने । त्यसैगरी प्रतिनिधि सभामा पनि दुई दल मिलेर नै ४५ सिट जित्ने उनले दाबी गरे।
त्यसो भए केही थोरै सिटका लागि कांग्रेससँग किन मोलमोलाइ गर्नुभएको त ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनले भने, ‘उत्तरी भू–भाग बढी मिसिएको राजमार्ग क्षेत्रका केही सिट सुनिश्चित गर्न मात्र हामीले कांग्रेससँग पनि सहकार्य गर्न खोजेका हौं । हामीसँग मिल्नु कांग्रेसकै हितमा छ।’
एमाले र माओवादी केन्द्रको पहलमा बृहत् वामपन्थी एकताको घोषणा भएलगत्तै यी दुई दलले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेका थिए । वामपन्थी एकताको घोषणासँगै कांग्रेसले पनि बृहत् लोकतान्त्रिक गठबन्धनको प्रयास थालेपछि त्यसमा यी दुई मधेस केन्द्रित दलसँग सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेको थियो।
‘हामी दुई दल अब एक ढिक्का भएर अघि बढ्छौं । लोकतान्त्रिक गठबन्धनका लागि हामी तयार छौं, तर गए सँगै जान्छौं, नगए जान्नौं’, महतोले भने । यी दुई दलले कुनै पनि गठबन्धनमा एक्लै सहभागी नहुने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । आफूहरुलाई फुटाएर भए पनि लैजाने प्रयासप्रति चनाखो रहेको महतोले बताए।
प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा आइतबार बसेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कार्यदलको बैठकमा यी दलले आफ्नो दाबी पेश गरेपछि कांग्रेसले आन्तरिक छलफल गरी निर्णय दिने बताएको छ । कांग्रेसले शीर्ष तहमा छलफल गरेपछि मात्र निर्णय दिन सकिने बताएपछि वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ।
‘शीर्ष तहमा छलफलपछि पुनः सोमबार बस्ने गरी कार्यदलको बैठक टुंगिएको छ । छलफल सकारात्मक छ, तर सोमबारसम्म कुनै निष्कर्षमा पुगिएला’, मधेस केन्द्रित दलसहितको लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणका सूत्रधार कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भने।
प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको कुल १ सय ६५ सिटमध्ये यी दुई दलले ५५ सिट दाबी गरेका हुन् । प्रदेश सभाको सिट र मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस सहमत भए यी दुई दल ५० सिटमा सहमति गर्न तयार छन् । त्यसबाट २ दलले २५–२५ सिट भाग लगाउनेछन्।
त्यसैगरी प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको ३ सय ३० मध्ये संघीय फोरम र राजपाले १ सय ३५ सिट दाबी गरेका छन् । प्रदेश सभामा पनि १ सय २० सिट दिए सहमति जुट्ने कार्यदलका राजपातर्फका एक सदस्यले जानकारी दिए।
‘तर २ मुख्यमन्त्रीको दाबी हाम्रो बटमलाईन हुनेछ, त्यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन,’ ती नेताले भने ।
फोरम र राजपाले आफूहरुबीच एक–एक बाँड्ने गरी प्रदेश–२ र प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन्।
मूल विषय नमिलिसकेकाले चुनाव चिह्न र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबारे कार्यदलको बैठकमा सामान्य छलफल मात्र भयो । फोरम र राजपाबीच चुनावी तालमेलमा कुरा मिले सरकारबाट माओवादी केन्द्रलाई हटाएर यी दुई दललाई समेटेर चुनावमा जाने प्रस्ताव समेत कांग्रेसले अघि सारेको छ।
यी दुई दलको सहभागिता बिना बहुमत नपुग्ने भएकाले कांग्रेसले विपक्षीसँग तालमेल गरिसके पनि माओवादीलाई तत्काल सरकारबाट नहटाएको हो । राजपा नेता तथा कार्यदल सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले कांग्रेससँग विविध विषयमा कुरा भए पनि टुंगोमा पुगिनसकेको बताए।
‘हामीले आफ्ना प्रस्ताव राखेका छौं, उहाँहरुले शीर्ष तहमा छलफल गरेर जानकारी गराउने भन्नुभएको छ’, उनले भने।